Ukuhambisa Isilinganiso Sokubikezela Forex Strategy | ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Ukuhambisa Isilinganiso Sokubikezela Forex Strategy
Ukuhambisa Isilinganiso Sokubikezela Forex Strategy
Imakethe ye-forex ihlukile ngokuqhathaniswa nezinye izimakethe zokuhweba. Izimakethe eziningi zokuhweba zinezinqamu ezinkulu zabahlanganyeli bokuhweba abangabaqageli, labo abazama ukuzuza emakethe ngokuya ngokushintshashintsha kwamanani. Imakethe ye-forex kodwa yehluke kakhulu. Yize futhi kunabaqageli abaningi abathengisa izimakethe ze-forex, isinqamu esikhulu semisebenzi esenzelwa ukuthengiselana okuvamile kwebhizinisi, okudingeka ukuthi amabhizinisi aphesheya enze imisebenzi yawo yansuku zonke. Lapho imakethe ibuswa yilokhu kuthengiselana, imakethe ivame ukuzungeza ngaphandle kwesiqondiso esicacile. Noma kunjalo, imakethe ye-forex nayo inokuthambekela okuqinile kokuthambekela ezikhathini eziningi. Lokhu kubangelwa amabhange amakhulu ezikhungo aguqula umbono wawo ngomnotho futhi ngaleyo ndlela ashintshe iphothifoliyo yabo yokuhweba kwangaphambili. Ngezinye izikhathi babegcina imali kwiDola laseMelika, ngezinye izikhathi babedlulela eJapan Yen noma i-Euro. Futhi lokhu kwenzeka kaningi. Kepha sikubona kanjani lokhu kuhamba?
Izitayela ezinkulu ezibangelwa amabhange amakhulu zivame ukungaqondakali. Noma kunjalo, abathengisi bangangena ngqo kuzitayela ezinjengalezi eziqala ngalo. Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokukhomba ukuqala kwethrendi ngokusebenzisa izinkomba zobuchwepheshe. Ukusebenzisa izinkomba zobuchwepheshe kunikeza abathengisi ukuqonda ukuthi kwenzekani emakethe. Ivumela abathengisi ukuthi babone ukuthi imakethe isanda kuzungeza yini noma ngabe ikhombisa izimpawu zomkhuba ongaba khona.
Guppy Okunzima Multiple Okumaphakathi
1 Guppy Okunzima Multiple Okumaphakathi
2 Isibikezeli seFX
4.3 Ungayifaka kanjani iMoving Average Forecaster Forex Trading Strategy?
Isilinganiso sokuhamba singenye yezinkomba zobuchwepheshe ezithandwa kakhulu. Isetshenziswa kabanzi ngenxa yobulula bayo neqiniso lokuthi isebenza nje njengenkomba. Kuyasiza abathengisi ngokunengqondo ukukhomba inkomba yesiqondiso.
Abahwebi bavame ukukhomba ukuqondiswa kwemikhuba ngokubheka indawo yentengo maqondana nesilinganiso esihambayo. Izimakethe ezinenkani zibonakala ngokwenyuka kwamanani, okuhambisana nentengo ivala njalo ngaphezulu kwesilinganiso esihambayo. Izimakethe ze-Bearish ngakolunye uhlangothi zibonakaliswa ngamanani entengo, lapho intengo ihlala ivala ngaphansi kwesilinganiso. Abanye abathengisi basebenzisa ithambeka lesilinganiso esihambayo ukwahlulela ukuthi imakethe iyathrenda yini noma cha. Umfutho wokukhuphuka okhulayo uvame ukwehlisa ijika lomthambeka wesilinganiso esihambayo.
Isilinganiso esihambayo siyithuluzi lokuhweba lobuchwepheshe eliwusizo kakhulu. Kuyasebenza futhi kunengqondo ngokunengqondo. Noma kunjalo, kunamapharamitha amaningi wokuhamba ahlukile angasetshenziswa ukwahlulela ukuthambekela. Ukuthambekela kwe-bullish ngesilinganiso esifushane sokuhamba kungahle kube okuphambene ngqo nesikhathi esimaphakathi sokuhamba.
I-Guppy Multiple Moving Average iyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso enebhendi lezilinganiso ezihambayo. Inesethi yesilinganiso sokuhamba esifushane nesilinganiso sokuhamba sesikhathi eside. Isilinganiso sokuhamba sesikhashana esifushane sakhiwa 3, 5, 8, 10, 12 kanye nezikhathi ezihamba phambili ezingama-15. Izilinganiso ezihambayo zesikhathi eside zakhiwa 30, 35, 40, 45, 50 kanye nezikhathi ezihamba phambili ezingama-60. Ukuba nezilinganiso eziningi ezihambayo ezibonisa inkomba efanayo yokuhweba kusiza abathengisi ukuthi babone ukunyakaza kwamanani okuqina okungaholela ezinkambisweni zesikhathi eside.
Abahwebi bavame ukusebenzisa ukweqa amasethi wesilinganiso sokuhamba esikhathi esifushane nesikhathi eside ukukhomba ukubuyela emuva kwesimo. Izilinganiso ezihambayo eziphumayo nakho kukhombisa ukuthambekela okuqinile.
I-Forecaster ye-FX iyinkomba yomfutho yangokwezifiso esiza abahwebi ekuboneni inkombandlela yokuthambekela. Kuyinto inkomba oscillating okusekelwe crossover of ezomhlaba ezihambayo, i-Oscillator Yezilinganiso Zokuhamba (ISI-8) inkomba, kanye nenkomba ye-Fisher Transform. Ngendlela, ukuhlangana kwezinkomba eziningi. Ukuba nale confluence engaka kwenza le nkomba isebenze kahle kakhulu ekuboneni inkomba yokuqondisa.
I-FX Forecaster inamasethi amabili ama-histograms agqagqene, eyodwa imele ukuthambekela kwesikhashana futhi enye ithrendi yesikhathi eside. Ukuba namasethi amabili amahle we-histogram akhombisa ukuthambekela kokukhishwa ngenkathi ama-histograms womabili kokubi akhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Ama-crossovers womabili ama-histograms ngenhla noma ngaphansi kwe-zero angakhombisa ukuguqulwa kwethrendi.
Ukuhweba leli su, abathengisi kumele bafune ukuhlangana kwamasignali wokuguqula izinto okukhonjiswe yiGuppy Multiple Moving Average kanye nenkomba yeFX Forecaster.
Ngesikhathi sezimakethe ezingahambeli phambili, i-Guppy Multiple Moving Average ibonakala ngemigqa emaphakathi ecindezelweyo ehambayo. Isenzo sentengo sibuye sithande ukusika nxazonke kakhulu endaweni yenkambiso yesikhathi eside. Noma kunjalo, njengoba imakethe iqala ukuthambekela, le migqa ivame ukuqhuma futhi intengo ivame ukusuka kumkhuba wesikhathi eside.
KwiFX Forecaster, izimakethe ezingezona ezihamba phambili zivame ukuba nemigoqo ye-histogram enqamula phakathi kwe-midline. Le migqa nayo ivamise ukuba nezimpawu zokuphikisana nomkhuba. Noma kunjalo, uma umfutho unamandla ngokwanele futhi imakethe iqala ukuthambekela, i-histogram yesikhathi esifushane imvamisa yayiwela i-midline ilandelwe yi-histogram yesikhathi eside.
Esikufunayo ukuhlangana kwe-crossover ye-Guppy Multiple Moving average yesikhathi esifushane neyesikhathi eside kanye ne-crossover yama-histograms womabili wesikhombi se-FX Forecaster.
Amabili Wemali: okungcono ngababili abakhulu nabancane
Womabili la ma-histograms esibonisi se-FX Forecaster kufanele eqe ngenhla kwe-zero ekhombisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish
Isethi yesilinganiso esimaphakathi esinyakazayo yesikhombi se-Guppy Multiple Moving Averages kufanele iwele ngaphezu kwesethi yesilinganiso sokuhamba yesikhathi eside ekhombisa ukubuyela emuva kwethrendi
Izilinganiso ezihambayo zesikhashana esifushane kufanele ziqale ukuphuma
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba yeFX Forecaster ikhombisa i-histogram engemihle
Womabili ama-histograms esibonisi se-FX Forecaster kufanele eqe ngezansi kuka-zero akhombisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish
Isethi yesilinganiso sokuhamba esifushane yesibonisi se-Guppy Multiple Moving Averages kufanele yeqe ngaphansi kwesethi yesilinganiso sokuhamba yesikhathi eside ekhombisa ukubuyela emuva kwethrendi
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba yeFX Forecaster ikhombisa i-histogram enhle
Leli qhinga ngelinye elihlose ukuthatha ukuhweba ekuqaleni komkhuba omusha. Uma ukuthambekela kunomfutho owenele futhi kunokuvumelana kokuqondiswa kwethrendi yayo, abathengisi bangabambelela ekuhwebeni kuze kube sekupheleni komkhuba. Noma kunjalo, kuzoba nezikhathi lapho abathengisi bekhishwa khona ekuhwebeni ngenxa yokuhlehliswa ngaphambi kwesikhathi kwama-histograms esikhathi esifushane. Yize kungcono ukunamathela emithethweni ukuze uvikele inzuzo, abathengisi abanolaka kakhulu bangahlulela amandla ethrendi ngokuya ngokunyakaza kwentengo nokuthi intengo iziphatha kanjani njengoba isondela ezilinganisweni ezihamba phambili zesikhathi eside.
Ukuhambisa Isilinganiso Sokubikezela nge-Forex Strategy kuyinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Ukuhamba Okumaphakathi Kwe-Forecaster Forex Trading Strategy kunikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani iMoving Average Forecaster Forex Trading Strategy?
Landa i-Moving Average Forecaster Forex Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha Ukuhamba Okumaphakathi Esilinganisweni Sokubikezela Forex Strategy
Uzobona i-Moving Average Forecaster Forex Trading Strategy iyatholakala kwiShadi lakho
Isiqephu esedluleNon-Repainting SuperTrend Inkomba MT4
Isihloko esilandelayoIntengo ye-T3 Imbondela Yesilinganiso se-MT5
Winner ADX Trend Forex Ukuhweba Isu
3 MA Fan Momentum Forex Ukuhweba Isu
I-Pin Bar Correlation Reversal Forex Trading Strategy
Major Trend Sunrise Forex Ukuhweba Isu
3D Umhubhe Breakout Forex Ukuhweba Isu
Advanced Bollinger MACD Forex Ukuhweba Isu
Julayi 30, 2021
Isikhombi se-MTF Stochastic v2.0 se-MT4
Izinkomba ze-Forex MT54231
Amasu we Forex1058
I-Forex Trend Ukulandela Amasu166
Amasu Okuqhamuka Forex66
UTim Morris - Julayi 30, 2021 0